Ukupakisha Komkhiqizo we-elekthronikhi
Itreyi leselula lomakhalekhukhwini
uginindela ugqoko we-condenser pen
Itreyi lephepha lezesekeli zekhompyutha
eminye imikhiqizo kagesi uginindela ugqoko
Ukupakisha Komkhiqizo Wabathengi
Itreyi lebhodlela likabhiya
Pulp Ukupakisha ezinye izidingo zansuku zonke
Ibhokisi lesipho lezimonyo noma itreyi le-pulp
uginindela ugqoko weso leso
Sihlonziwe eTaizhou amabhizinisi asezingeni eliphakeme ngo-2021!
Muva nje, iTiantai Dingtian Packaging Co., Ltd. iye yahlungwa njengebhizinisi eliphezulu elikhokha kakhulu eTaizhou City ngonyaka ka-2021. Okokusebenza kululazekile futhi kuyayilimaza imvelo.
Mayelana nezinzuzo zomkhiqizo wamathileyi wephepha anobungani bemvelo
Siyazi ukuthi eminyakeni yamuva nje, izwe libeke umnyombo wentuthuko esimeme ezingeni lokuthuthuka ngamandla kwamandla ahlanzekile. Kulesi simo, ukuvela kwamathileyi wamaphepha alungele imvelo kuthinta ngqo isimo sezulu somhlaba wonke nemvelo. Ukusetshenziswa kwemvelo evuselelekayo ...
Umlando wokuthuthukiswa komkhakha wokubumba we-pulp eChina
Imboni ye-pulp molding iye yathuthuka iminyaka engaphezu kwengu-80 emazweni athile athuthukile. Njengamanje, imboni yokubumba uginindela inezinga elikhulu eCanada, e-United States, eBrithani, eFrance, eDenmark, eNetherlands, eJapane, e-Iceland, eSingapore nakwamanye amazwe. Phakathi kwabo, uBrita ...
Yiziphi izici zemikhiqizo yethreyi lephepha leselula?
Ngokuthuthuka nokuthuthuka komphakathi, ukukhiqizwa kwemikhiqizo yethreyi ephathekayo ephathekayo kudinga ukuvikelwa okuluhlaza kanye nokwezemvelo, ngakho-ke inezici ezilandelayo zomkhiqizo: 1. 90% uginindela we-bagasse, inhlanzeko, luhlaza futhi inobungani bemvelo, futhi inenzuzo empilweni. 2. Ngeke ...
Siyini isizathu esenza ithreyi lephepha lithandwe?
Amathemba entuthuko embonini yethreyi lephepha abanzi, futhi amathreyi wamaphepha asetshenziswa nasezimbonini eziningi. Izizathu zifingqwe ngale ndlela elandelayo: (1) Intuthuko yezomnotho esheshayo ihlinzeka ngethuba lokuthuthuka lomkhakha wokupakisha amathreyi wamaphepha. (2) Ukuthuthuka okuqhubekayo k ...
Uyini ugqoko wethaya?
I-Pulp tray yinto yokupakisha ephumelelayo ekhiqizwa uginindela. Imikhiqizo ye-pulp ebunjiwe yenziwa ngokunciphisa iphepha lodoti libe uginindela. Le nqubo ifaka ukungeza izithuthukisi ezahlukahlukene zokusebenza. Isikhunta esinezigaxa bese sicwiliswa kuginindela bese kukhishwa amanzi kusigaxa ngomshini oqinile. ...
I Development Trend Of Pulp Molding Products Enkampanini Yethu
Inkampani yethu ibilokhu ikhula embonini yempuphu yokubumba imikhiqizo iminyaka engu-6, lapho intuthuko enkulu yenziwe. Ikakhulukazi, imikhiqizo yokupakisha enobungani nemfucumfucu elahlwayo yemvelo esetshenziswayo isetshenziswe kabanzi, kepha kusenemikhawulo eminingi ku-th ...
Inqubo Yokukhiqiza Yenkampani Yethu
Ukukhiqizwa kwe-Pulp ebunjiwe ejwayelekile kubandakanya ukulungiselela uginindela, ukubumba, ukomisa, ukucindezela okushisayo nezinye izinqubo. 1. Ukulungiselela uginindela Ukudonsa kufaka phakathi izinyathelo ezintathu zokudonswa kwempahla eluhlaza, ukugaya kanye nokugaya. Okokuqala, i-fiber eyinhloko imiswe ku-pulper ngemuva kokuhlolwa kanye ne-classifi ...
Izici Of Okufakiwe Pulp
Ukupakisha kudlula kulo lonke uhlelo lokunikezwa kokuthengiswayo kusuka ezintweni ezingavuthiwe, ekuthengeni, ekukhiqizeni, ekuthengiseni nasekusetshenzisweni, futhi kuhlobene nempilo yomuntu. Ngokwenziwa okuqhubekayo kwezinqubomgomo zokuvikelwa kwemvelo kanye nokwenza ngcono izinhloso zabathengi zokuvikela imvelo, i-poll ...
Izimonyo Mf Box, Pulp Cup Umnikazi, Ukudaya Ukusonga Umtfumbu Holder, Udayi Umthoyi Tray, Ibhokisi Lokupakisha Ukudla, Ukupakisha Ukupakisha Kwekhadibhodi,